Nke a bụ OnePlus 5T na ndị a bụ nkọwa ikpeazụ ya | Gam akporosis
Dị ka anyị na-agwa gị ụbọchị gara aga, na Nọvemba 16 ka a na-enye OnePlus 5T iwu, ọnụahịa nke rutere n'ahịa iji dochie OnePlus 5. Ọtụtụ ndị bụ asịrị ndị na-agbapụta tupu ngosipụta gọọmentị nke ọdụ a, dị ka iche sụgharịrị nyere anyị ohere inweta echiche nke ihe ọdụ ga-adị ka ahụ.
Taa, anyị nwere ike ịkwụsị inwe obi abụọ, ebe ọ bụ na ọzọ edozila ihe oyiyi nke ọnụ ọnụ a, mana oge a ha abụghị nsụgharị, kama foto ikpeazụ nke ngwaahịa a, yana dịka anyị nwere ike ịhụ, OnePlus abanyela na omume nke afọ a nke iwelata akụkụ n'akụkụ na nke kachasị.
Ma obughi nani na enwere otutu foto, ma o nwekwara akpatre nkọwa nke otu a leaked, nkọwa na anyị zuru ezu n'okpuru.
Nkọwa OnePlus 5T
AMOLEd e 6,01-inch ihuenyo nwere mkpebi 2.160 × 1.080 na 18: akụkụ 9. Ihuenyo integrates a Gorilla Glass 5 nchedo.
Snapdragon 835 processor esonyere 6/8 GB nke RAM, dịka ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta ụdị abụọ dị iche iche.
64 na 128 GB ikike nchekwa.
OxygenOS sistemụ arụmọrụ dabere na gam akporo 7.1.1
16 mega-pixel igwefoto n'ihu na oghere nke f / 2.0
2 n'azụ ese foto: otu n'ime 16 megapixels na oghere nke f / 1.7 na nke ọzọ nke 20 megapixels nwere otu oghere. Companylọ ọrụ Japan bụ Sony rụpụtara igwe foto abụọ a.
Ihe mkpisiaka ihe mmetụta dị na azụ nke ngwaọrụ ahụ
Isi ekwe nti njikọ
Dị ka anyị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo a, ọzọ imewe doro anya si n'ike mmụọ nsọ site iPhone 7 Plus, ma ọ dịkarịa ala na azụ, ihe nwere ike gbanwee ka a ghara ibo ha ebubo na ha na-edegharị site n'aka onye nrụpụta ọzọ, dịka o mere Xiaomi na ọdụ mbụ ndị ọ malitere na ahịa ruo mgbe ọ nwere ike ịgbaso usoro akara nke ya .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Nke a bụ OnePlus 5T na ndị a bụ nkọwa ikpeazụ ya
Eze Emeritus dijo
Zaghachi Eze Emeritus
Android Oreo 8.1 na-ebelata ohere nke ngwa ndị anyị na-anaghị eji ịchekwa ohere
Elekere mkpuchi kacha mma maka gam akporo